Qabiinsa mirga namoomaan waggaa tokko keessatti Itoophiyaan hin himatamne-Nabiyaat Geetaachoo - | - OBN
Qabiinsa mirga namoomaan waggaa tokko keessatti Itoophiyaan hin himatamne-Nabiyaat Geetaachoo
OBN Bit. 28, 2011- Dubbii Himaan Ministeera Dhimmaa Alaa Itoophiyaa ibsa miidiyaaleef kennaniin qabiinsa mirga namoomaan walqabatee Itoophiyaarratti himatni dhiyaate hin jiruu jedhan.
"Qabiinsa mirga namoomaan walqabatee waggaa tokko darbe keessatti himatni Itoophiyaa irratti dhiyaate hin jiru," jedhan Dubbi Himaan Ministeera Dhimma Alaa Obbo Nabiyaat Getaachaw.
Keessattuu tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota gama hiikutiin fudhaten guyyaa bilisummaa pireesii idiladdunyaa ji'a itti aanu keessa kabajamu akka keessummeesitu ta'eera jedhan dubbi himaan ministeerichaa.
Gama biraatin araada sammuu nama adoochu daddabarsuun shakkamtee Chaayinaatti to'annoo seeraa jala kan jirtu durbee Naazraawit Abarraa ilaalchisees ministeerri dhimma alaa dhimmicha hordofaa akka jiru Obbo Nabiyaat himan.
Kanaafis waajjiraaleen inbaasii fi qoonsilaa Chaayinaa keesaatti argaman dhaabbilee mootummaa Chaayinaa dhimmichi ilaalatu walin dhimma Naazraawit irratti odeeffannoo wal jijjiiraa jirus jedhan.
Hanga ammaattis bakka bu'aaan waajjira qoonsilaa Itoophiyaa gara magaala Guaanju imaluun al sadi ishee daawwataniiru kibxata tti aanus ishee daawwatu jedhaniiru.
"Hanga ammaatti abbaan alangaa biyya Chaayinaa himata waan hin hundeesineef oduun dhimmichi akka murtee argatetti haasa'amu dogongora" jedhan Obbo Nabiyaat Getaachaw.
Hojii diplomaasii lammiilee irratti xiyyeeffachuun hojjetameen biyyaalee lammiileen Itoophiyaa keessa jiran walin waligaltee mallatteessuu, mirgi isaanii akka kabajamu gochuu fi kunneen hidhaman akka hiikkaman gochuuratti hojjetamuusaas himaniiru.
Hanga ammaattis Saawudi Arabiyaa, Qatar, Jordaan fi UAE walin waliigalteen mallattaa'era jedhan.
Kana malees lammileen 70,000 ol gara biyyaa akka deebi'an taasifameera jedhan.
Lammiileen hojii hojjetanii mindaan hin kaffalamneef mindaan akka kaffalamuf, kunneen mana hidhaa turan dhiifamaan akka gadi lakkifaman hojjetamaa turuusaas Obbo Nabiyaat himan.
171 Views 4/7/19